इमेज साप्ताहिक : 2012-03-11
आगलागीमा परि एकको मृत्यु
विदुर÷आइतवार राती नुवाकोट जिल्लाको काहुले गाविस वडा नं. ६ दावाचेतमा आगलागी हुँदा एक जनाको जलेर मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा पाँच वर्षिया बालक चिली तामाङ रहेका छन् । घरमा बालेको मैनबत्तीका कारण आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । मैनबत्ती बालेर पढिरहेको र बालक निधाएपछि आगलागी भएको बताइएको छ ।
साथै चिलीका पिता मङ्गले तामाङ गम्भिर घाइते भएका छन् । उनको उपचार त्रिशुलीमा सम्भव नभएपछि काठमाडौँ पठडाइएको छ । छोरालाई आगोबाट बचाउँन खोज्दा उनी पनि जलेका हुन् । परिवारका अन्य पाँच सदस्यहरु भने सकुशल छन् ।
आगलागीमा परी घरका सम्पूर्ण सामग्री, लत्ताकपडा र अन्नपात जलेर नष्ट भएको छ । २२ लाख रुपैया भन्दा बढीको क्षतिभएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, March 11, 2012 No comments:
विदुर÷त्रिशुली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सवारी साधन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
जिल्ला भित्रिएसंगै प्रजिअ पाण्डेले ३ एको बा १ ञ १८३७ र बा १ ञ १८३८ नम्वरको दुई वटा सवारी साधन श्रीमतीलाई लम्जुङ्गबाट नुवाकोट ल्याउन र लैजान प्रयोग गर्ने गरेका छन् । समाचारश्रोतका अनुसार लम्जुङ्गको एक गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत प्रजिअ पत्निलाई कार्यालय विदाको समयमा प्रजिअसम्म ल्याइपु¥याउन र कार्यालय समय भ्याउन आयोजनाकै गाडी प्रयोग हुने गरेको छ । श्रोतका अनुसार सातामा दुई पटकसम्म नुवाकोट देखि लम्जुङ्गसम्मको यात्रा गरेर आयोजनाका चालकहरू हैरान भएका छन् । ‘न गुनासो राख्ने ठाउँ पाएका छन्, न सक्दिन भन्नसक्छन् चालकहरूले’ श्रोतले भने ।
प्रजिअ पाण्डेले साप्ताहिक रुपमा सवारी साधन दुरुपयोग गरेको विषयमा आयोजना प्रमुख ऋषिकेश शर्माले गुनासो गर्दा उल्टै खप्की खाएको बताइएको छ । ‘केही उपायँ नभएपछि उर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीसँग गुनासो गर्ने तयारी भइरहेको श्रोतले दावी गरेको छ । ‘श्रीमतीमात्र होइन सासुससुरासम्म आयोजनाको गाडीले घुमाउने टेन्डर पारेझै भयो’ श्रोतले ठट्टा गर्दै भन्यो ।
विहिवार जिल्ला विकास समितिको सभाहलमा आयोजित महिलाहरूको सम्मान कार्यक्रममा आयोजक तर्फबाटै घरमा सुतिरहेका विदुर–४ का ९३ वर्षिया राममाया गुरुङ्गलाई कार्यक्रम सकिएछि घर पु¥याउनको लागी जव हाहाकार प¥यो, त्यपछि प्रजिअ पाण्डेले दिएको प्रतिक्रियासंगै उक्त सवारी साधन अनियमितताको घटना बाहिर आएको हो । गुरुङ्गलाई घरसम्म पु¥याउनको लागी गाडी खोज्ने क्रममा अगाडी भेटिएको प्रजिअको गाडीलाई आग्रह गर्दा उनले ‘सरकारी गाडी प्रयोग गर्न मिल्दैन’ भनेपछि उपस्थितहरूले मुन्टो बटारेका थिए ।
सदरमुकाममा रेडियो त्रिशुली
विदुर÷नुवाकोटको सदरमुकाम विदुरबाट पहिलो पटक सामुदायिक रेडियो सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
विकास सञ्चार नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले ८८.४ मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली प्रशारणमा ल्याउन लागेको हो । शुक्रवार विदुर स्थित होटल शानदारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको थियो । एक सय वाट प्रशारण क्षमताको भएको रेडियो त्रिशुलीको परिक्षण प्रशारण चैत १० गते बाट गर्ने जनाएको छ । रेडियोले समुदायको हितमा बिभिन्न कार्यक्रम र सूचना प्रशारण गर्ने संस्थाका अध्यक्ष कपिलदेब खनालले जानकारी दिएका छन् । विदुर नगरपालिका–४ विदुरमा स्टेशन रहेने उक्त सामुदायिक रेडियोको प्रशारणक्षेत्र नुवाकोटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी भु–भाग, रसुवा, धादिङ ,सिन्धुपाञ्लचोकको आधा भु–भाग र मकवानपुरको केहि भाग रहनेछ ।
नुवाकोट जिल्लामा रेडियो त्रिशुली सहित चार वटा सामुदायिक रेडियो रहेका छन् ।
रेडियोका श्रोतामा लोकप्रिय भोला
विशाल आले मगर
विदुर÷कार्यक्रम सञ्चालक मात्र होइन रेडियोका श्रोतापनि लोकप्रिय बन्दारहेछन् भन्ने फरक उदाहरण पेश गरेका छन् विदुर नगरपालिका–२ नुवाकोटका ३२ वर्षिया भोला थापाले ।
आफ्नो घरवरपर सुनिने प्रायः रेडियोहरूको धेरै कार्यक्रम नविराईकन सुन्ने थापाले नुवाकोट सहित रसुवा, गोरखा, काठमाडौँ, धादिङलगायतका थुप्रै जिल्लामा आफ्ना ‘फ्यान’हरू बटुलेका छन् ।
‘रेडियोमा प्रशारण हुने कार्यक्रमहरू सुनेर फोन गर्ने र सम्झनाका खवरहरू छाढ्दा छाढ्दै चार सय भन्दा बढी साथीहरू बनाइसके’ भोला थापाले भने । लोकलोहोरी र लोक सँस्कृतिसंग सम्वन्धीत कार्यक्रम मनपराउने थापा कार्यक्रमको विषयमा आफुले बनाएको धारणा राख्न रेडियोमा फोन गरिहल्छन् ।
त्यत्ती मात्रै होइन रेडियोमा प्रशारण हुने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन फोन लगाउन नसकेर दिक्क हुँदा पनि उनि समाधान निकालेर अन्यसाथीहरूलाई सहजिकरण गर्छन् । ‘प्रत्येक रेडियोको फोन लाग्ने समय फरक हुन्छ, त्यो केही सेकेन्डको फरकमा मात्र रहन्छ’ थापाले भने– रेडियोमा फोन नलागेपछि साथीहरू मलाई फोन गरेर सोध्छन्, सिकाउने गरेको छु ।’
जिल्लाका नुवाकोट एफएम, रेडियो अभियान, रेडियो जालपा र अन्य जिल्लाका रेडियोहरू रेडियो चितवन, रेडियो धादिङ, काभ्रेको रेडियो सेफड तथा गोरखाका रेडियोहरूमा उनी दैनिकजसो फोन गर्न भ्याउँछन् । ‘उपत्याकाको त सवै जसो रेडियोमा कुरा गर्नेगरेको छु’ उनले भने ।
प्रायः रेडियोमा बोल्न भ्याउने भोला थापा भेट्नकै लागी गोरखा, ललितपुर र काभ्रेका साथीहरूले ककनीमा बनभोज कार्यक्रम राखेको सुखद् स्मृतीले थापालाई आजभोलि फोन गरिरहन हौसला मिलेको छ ।
रेडियोका काक्रममाहरूमा फोन गर्ने र साथीहरूलाई सम्झना सुनाउने उनका लागी नशा नै बनेको छ । ‘एक दिन मात्रै कुनै रेडियोमा सुनिएन भने साथीहरूको विरामी होकी भन्ने फोनले दिक्क बनाउने गरेको छ उनलाई ।
‘त्यसैले रेडियो सुन्ने फुर्सद नहुँदा पनि कार्यक्रमहरूमा भने फोन गर्नेगरेको छु, मलाई कुन कार्यक्रम कुन रेडियोमा कत्ती बजे आउँछ भन्ने याद रहन्छ’ उनले भने । कार्यक्रम नसुन्दा पनि रेडियोका कार्यक्रमहरू अड्कलबाजीमै मिलाउँनु र फोन लगाउनसक्नु नै उनको खुवी रहेको साथीहरूको भनाई रहेको उनी सुनाउँछन् ।
विदुर नगरपालिकाको कार्यालयमा नौँ वर्ष देखि विद्युत् हेल्परको रुपमा जागिरे जीवन धानिरहेका थापा दुई छोरासंग बस्छन् । श्रीमती बैदेशीक रोजगारीमा रहेका उनी भन्छन्– ‘अविवाहित भएको भए रेडियोबाढट विवाह हुनरहेछ । तै पनि विवाहको लागी मरिहत्ते गर्नेहरू थुप्रै छन् । उनीहरूले सोचेझै किन हुन्थ्यो र ? म इमान्दार मानिस ।’
कार्यक्रमहरूमा फोन गर्दा गर्दै फोन नम्वर साटासाट गरेर चार सय भन्दा बढी साथी बटुलेका थापा अब रेडियोका श्रोताहरूको सङ्गठन बनाउने सोचमा छन् । ‘हामी रेडियोको कार्यक्रमका विषयमा समेत समिक्षा गरेर एकै साथ कार्यक्रम सुन्ने गरेका छौँ ।’
रेडियोले माया गर्नेहरू पाएँरेडियोमा कस्ता÷कस्ता कार्यक्रम सुन्न मनपराउनुहुन्छ ?
प्रायः लोक दोहोरी अनि अलि रमाइला खालका कार्यक्रम मनपर्छ ।
धेरै रेडियोमा फोन गरेको सुनिन्छ नि ?
रेडियो सुन्नु त मेरो पेशा जस्तै भएको छ । बिहान देखि रातीसम्म रेडियो सुनिन्छ फोन गरिन्छ ।
किन रेडियो सुन्नुहुन्छ तपाई ? हिजो आज त टिभि छ, मोबाइल पनि त छ ?
मलाई मोबाइल टिभिमा रमाउन मनै लाग्दैन । म रेडियोमा मात्र हो खुल्न सक्ने, रेडियोमा धेरै साथी छन् जस्ले गर्दानै मलाई रेडियो सुन्न मन लाग्छ ।
रेडियोमा लागेर धेरै श्रोता साथी बनाउनु भएको रहेछ नि ?
होत । मेरो थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ । रेडियोले गर्दानै मलाई थुप्रै साथीसंग चिनाएको छ ।
रेडियोमा फोन गरेर तपाइले त दिनमा तीन÷चार सय रुपैयाँ सिध्याउनुहुन्छ रे नि हो ?
काँ हजुर त्यत्तिले मात्र पुग्नु, कहिलेकाही त साथीहरूलाई समेत हालिदिँदा त एउटा हात्तिनै सकिन्छ नि ।
रेडियोमा त तपाईको आवाज मिठो सुनिन्छ । कत्तिको केटिहरूको फोन आउछ ?
अब रेडियोमा फोन गर्न थाले पछि चार सय जना त साथीनै छन् । त्यसमा केटा केटी त साध्य छैन । तर माया गर्नेहरू धेरै छन् ।
बिहे गरौ भनेर फोन गदैनन् ?
फोन मात्र होत घरमानै आ’को रेकर्डनै छ । मेरो त छोराहरूनै ठिटो भैसके मलाई त्यस्तो कुराले खासै असर गदैन ।
रेडियोलाई यत्तिका माया गर्ने तपाई रेडियो भएन भने के गर्नुहुन्छ?
ओहो...मलाई रेडियो बिना त रहन सक्ने बानीनै छैन । बरु म रातभरि नसुति बस्न सक्छु तर रेडियो बिना सम्भावनानै छैन ।
बसपार्क सञ्चालन हुने
विदुर÷एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमाएक बर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भएको नुवाकोटको बसपार्क सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
बसपार्क चैत्र १ गतेबाट सञ्चालनमा आउनेभएको विदुर नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।
१ गते देखि बसपार्क प्रवेश गराएर मात्र आफ्ना सवारी साधानहरू राजधानी, रसुवा र अन्य गन्तव्यतर्फ जाने आउने व्यवस्था मिलाइएको विदुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मिठाराम हुमागाईले जानकारी दिएका छन् । व्यवसायीहरू आफ्ना रुटमा सबै सवारीसाधनहरू बसपार्क प्रवेश गराएर मात्र गन्तव्यतर्फ लैजान सहमत भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । व्यवसायीहरूले चार महिना सम्म बसपार्क प्रयोग गरेको कुनै पनि शुल्क समेत नलिने निर्णय भएको बताइएको छ ।
शहरी तथा वाताबरणीय सुधार परियोजना अन्र्तगत एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा बसपार्क निर्माण भएको हो । बसपार्क निर्माणमा एक करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गिट्टी बालुवा झिक्न प्रतिबन्ध
विदुर÷जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले जिल्लाका सबै नदीबाट बालुवा, गिट्टी झिक्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश विपरित हुने गरी कुनै पनि क्रसर सञ्चालन गर्न र नदीजन्य पदार्थ झिक्न प्रतिवन्ध लगाएको स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले बताउनुभएको छ । वाताबरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (आइइइ) गरेका र रितपूर्वक ठेक्का पाएका बाहेक अन्य क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए । प्रचलित कानुन र तोकिएको मापदण्ड विपरित सञ्चालन गरेमा १० हजार रुपैयाँ देखि एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने बताइएको छ ।
क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा नदीबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिटी उत्खनन् गर्दा नदीको वहावलाई असर पु¥याएकोले यस्तो निर्णय गरेको जिविसले जनाएको छ ।
नगर क्षेत्रमा पाकिङ्ग निषेध
विदुर÷दुर्घटना न्यूनिकरणका लागी विदुर नपरपालिका कार्यालयले नगर क्षेत्रका सडकहरूमा पार्किङ गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
लोड र अनलोड गर्ने समय बाहेक अरु समयमा कुनै किसिमका सवारी साधन पार्किङ गर्न नपाईने भएको विदुर नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।
विभिन्न यातायात व्यवसायीहरूसंग छलफल गरी नगर क्षेत्रमा सडकमा अव्यस्थित पार्किङ गर्न निषेध गरेको कार्यकारी अधिकृत मिठाराम हुमागाँईले बताएका छन् ।
उपेक्षामा ढिकीजाँतो चुली
विदुर÷जिल्ला सदरमुकाम विदुरबाट नजिकै रहेको ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्व बोकेको ढिकीजाँतो चुली अर्थात् फिर्केपकोट उपेक्षा र वेवास्थाका कारण ओझेलमा परेको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको गतिलो सम्भावना बोकेको नुवाकोटको खड्गभञ्ज्याङ, चारघरे र कल्याणपुर गाविसको सबैभन्दा अग्लो भेगमा अवस्थित ढिकीजाँतो चुली संरक्षण र प्रचारप्रसारको अभावमा अलपत्र परेको छ । जिल्लाभित्र र बाहिर अन्य भु–भागलाई एकै थलोबाट एकैसाथ अवलोकन गर्न सकिने उक्तकोटको आवश्यक संरक्षण र विकासमा कसैको ध्यान जान नसक्नु त्यहाँ पुग्ने जो कसैलाई पनि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ ।
समुन्द्री सतहदेखि झण्डै तीन हजार पाँचसय मिटरको उचाइमा रहेको चुली हाल गाईवस्तु चराउने र गोठालाहरूको दिनचर्या बिताउने थलोमा मात्र बनेको छ । चारघरे–४ का पद्मकुमारी भट्टका अनुसार केही वर्षअघिसम्म त्यस कोटको डाँडोमा पुराना ढिकी र जाँतो रहेको थियो । ढिकीजाँतो चुलीको नामले समेत चिनिने यो क्षेत्र त्यहाँका केही जागरुक स्थानिय व्यक्तिहरू बाहेक कसैको पनि आँखा खोजी र चासोका साथ फिर्केपकोटमाथि पर्न सकेको छैन ।
ऐतिहासिक किल्लाहरूबाट जिल्लाको नामाकरण भएको नुवाकोटका नौ कोटमध्ये फिर्केपकोट पनि एक हो । राष्ट्र एकीकरणका पिता पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोट एकिकरणको सिलसिलामा निर्माण भएको ढिकीजाँतो चुलीको गढीलाई त्यहाँको भौगोलिक सुन्दरता, उर्वर भूमी र ऐतिहाँसिक महत्वले सिङ्गो जिल्लाको शोभा बढाएको छ । संरक्षण अभावकै कारण दुई सय ५० वर्ष पुरानो किल्लाको भग्नावशेष मात्र भेट्न सकिन्छ । नुवाकोट राज्य एकिकरणमा हालको साततले दरबार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष अध्ययन गरी सजिलैसँग आक्रमण गर्न नौ कोट मध्येको प्रमुख युद्ध आधार किल्ला यसैलाई बनाइएको स्थानिय बुढापाका र बुद्धिजिवीहरूको ठम्याई छ ।
५० मिटर चौडाई र २ सय मिटर लम्बाईको क्षेत्रफलमा फैलिएको फिर्केपकोटको टापुको वरिपरि लगाईएको पर्खाल कहीँकहीँ भत्किएको अवस्थामा भेट्न सकिन्छ भने किल्लाको पश्चिमपट्टीबाट किल्ला प्रवेश गर्ने मुलद्वार अझैँ रहेकोले त्यहाँ दरबार समेत रहेको हुनसक्ने स्थानिय जानकारहरूको अनुमान छ ।
नुवाकोट एकिकरण अघिनै त्यस स्थानमा देवगाडे नामका राजाको वासस्थान रहेको र त्यहीँ दरबार बनाई राज्य गरेका उनले हालको बट्टार बजार र सदरमुकाम विदुरमा चरिरहेका मृग र गाइलाई ढिकीजाातो चुलीबाट बाँड हानेर मारी त्यसै ठाउँमा पु¥याएर मासु खाने गरेको किम्बदन्ती अहिलेपनि ताजै रहेको चारघरेका बद्रीप्रसाद भट्ट बताउँछन् ।
त्यहाँबाट नुवाकोटसहित आसपासका चार जिल्ला र नुवाकोटकै चालिसभन्दा बढी गाविसहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्छ । रसुवा, धादिङ र राजधानी काठमाण्डौसहित सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुरका केही भु–भागहरू पनि देख्न सकिने फिर्केपकोटलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्न सकेमा सिङ्गो जिल्लाको गरिमा बढाउन मद्दत पुग्ने नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विरेन्द्रराज केसीको भनाई छ । दृश्यावलोकन बाहेक जैविक विविधता र भौगोलिक बनावटको अध्ययनदेखि जडिबुटी खेती र पशुपालनको समेत प्रचुर सम्भावना रहेको यस भेगलाई उपयोग गरिए जिल्लाको आर्थिक विकासमा ठूलै फड्को मार्न सकिने केसीको धारणा रहेको छ ।
हाल त्यस भेगमा चिराइँतो, पाखनवेद, सिलटिमुर, बोकेटिमुरजस्ता जडिबुटीहरू पाइन्छन् । जसका गर्दा जडिबुटीको व्यावसायिक खेतीको व्यापक सम्भावना छ । हिमश्रृङ्खलाहरूको अवलोकनदेखि त्यस चुलीको चारैतिर डेढ किलोमिटर भन्दा अग्लो चट्टानले बनेको भु–भाग रहेकोले रक क्ल्याइमिङ र बन्जिजम्पको समेत सम्भावना बोकेका कारण पर्यटनका लागी महत्वपूर्ण मात्र छैन यसबाट स्थानिय रोजगारको वातावरण सृजना गर्ने अर्को सम्भावना छ ।
प्राकृतिक सुन्दरता र भौगोलिक बनावटले सजिएका थोरै स्थानहरूमध्येमा पर्ने यस कोटको विकासमा जिल्ला विकास समिति, पर्यटन विकासको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्था र निकायदेखि स्वयं सम्बन्धित गाविसहरूले समेत वेवास्ता गर्दा यसको अस्थित्व सङ्कटमा पर्ने भएपछि स्थानियवासीहरू चिन्तित बनेका छन् । हालै जिविस नुवाकोटले जिल्लाको पर्यटन विकास गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेकाले फिर्केपकोटको ढिकीजाँतो चुलीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न पहल
थालिएको शिक्षक रामप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभएको छ । जसका लागी स्थानियले आफ्नै लगानी र जनश्रमदानमा कोटको डेढ किलोमिटर तलसम्म चारघरे गाविसको भट्टगाउँदेखि करिब तीन किलोमिटर मोटरबाटो निर्माण गरिसकेका छन् ।
शिक्षकको हड्तालले पठनपाठन ठप्प
विदुर÷आइतवारबाट अनिश्चितकाली शैक्षिक हड्तालमा उत्रीएका शिक्षक सङ्गठनका जिल्लाको सम्पूर्ण विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएको छ ।
हड्तालमा उत्रिएका शिक्षकहरूले आइतवार जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटमा धर्ना समेत दिएका थिए । शिक्षक र सरकारी पक्षबीच भने वार्ता भइरहेको छ । वार्ताबाट कुनै निष्कर्ष निस्किएका छैन । वार्तामा शिक्षकहरूले आफ्ना माग पुरा गर्नुपर्ने र सहमतिपत्रमा वार्तामा सहभागी सबैले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका छन् भने सरकार मागका सम्बन्धमा लचक हुने बताइरहेको छ । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने लगायतका विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको शिक्षकहरूको आरोप छ । वार्ता चलिरहेका बेला शिक्षकहरूले अनिश्चितकालीन आम हड्तालको घोषणा गर्नु आपत्तीजनक भएको सरकारको भनाई छ । पटक पटक भएका बार्ता असफल भएपछि आइतवारदेखि शिक्षक संगठनहरूले अनिश्चितकालीन हड्ताल सुरु गरेका छन् । हडतालका कारण देशभरका बिद्यालयहरूको पठनपाठन ठप्प रहको छ ।
सरकार र शिक्षकहरूबीच सहमति हुन नसक्दा नजिकिदै गरेको प्रवेशिका परीक्षा समेत प्रभावित हुने भएको छ । शिक्षामन्त्रीले शिक्षकहरूसंगको बार्तालाई बेवास्ता गरेकाले प्रवेशिका परिक्षा अन्यौलमा परेको बताइएको छ ।
वन फाड्नेसंग एक लाख धरौटी
विदुर÷सरकारी वन फडानी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थानापती गाविसका दुई जनालाई जिल्ला अदालत नुवाकोटले जनही एक लाख रुपैयाँ घरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।
माघ १३, २०६८ मा पक्राउ परेका थानापती–५ का विकास अधिकारी र थानसिङ–१ का महेश पाठक गएको साता छुटेका हुन् ।
उनीहरूलाई अघेरीखोला सरकारी वन फाडेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सोही घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा उनीहरूले सार्वजनिक अपराध अन्र्तगत जनही १५ हजार रुपैयाँ घरौटी राखेको बुझिएको छ । उनीहरूले चिलाउनेको पाँच सय थान, सालको दुई सय ४७ थान र कटुसको तीन सय थान रुख काटेको जिल्ला अदालत नुवाकोटले ले प्रमाणित गरेको बताइएको छ ।
द्धन्द्धपिडितका अधिकारका कुरा
चारघरे÷ नेपाल वार एशोसियशन जिल्ला अदालत नुवाकोट इकाईको आयोजनामा चारघरे गाउँ विकास समितिको महेन्द्र उच्च माध्यामिक विद्यालयमा द्धन्द्धपिडित महिलाहरूको अधिकार र कानूनी उपचार सम्वन्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
चारघरे स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक राजेन्द्र पनेरुको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा वारका अध्यक्ष एवं स्थानीय शान्ति समिति नुवाकोट सदस्य गणेशप्रसाद खनालले कानूनी पाटोहरूका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानीय शान्ति समिति संयोजक नविन पुडासैनी सदस्यहरू विन्दा अर्याल, विन्दा ढुङ्गाना लायताकाहरूले मन्तब्य राखेका थिए ।
युवा सङ्घमा पुनः न्यौपाने
विदुर÷युवा सङ्घ नुवाकोटको छैटौँ जिल्ला सम्मेलनले रमेश न्यौपानेको अध्यक्षतामा पुनः कार्यसमिति चयन गरेको छ । शुक्रवार विदुरमा सम्पन्न सम्मेलनबाट न्यौपानेको अध्यक्षतामा ४१ सदस्यिय कार्य समिति बनेको छ ।
कार्य समितिका उपाध्यक्षमा रामचन्द्र श्रेष्ठ, सचिवमा पशुपती थापा, सह–सचिवमा बिरबल तामाङ र कोषाध्यक्षमा दिपक कार्की छन् । सङ्गठन विभाग प्रमुखमा इन्द्र पाण्डे छन् । नयाँ कार्यक्रमितिमा इलाकाबाट १३ जना, महिलाबाट पाँच जना, खुल्लाबाट १० जना, आदिवासीबाट पाँच जना र दलितबाट पाँच जना चुनिएको बताइएको छ ।
पासाङल्हामु राजमार्गको यात्रा जोखिमपुर्ण बन्दै
प्रकाश सुयल मगर
विदुर÷राजधानी काठमाडौँसँग नुवाकोट र रसुवा जिल्लालाई जोड्ने पासाङल्हामु राजमार्ग मर्मत हुननसक्दा यात्रुहरूको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ ।
काठमाडौँ देखि नुवाकोट सम्मको ६८ किलोमिटर र नुवाकोटबाट रसुवा जिल्ला सदरमुकाम धुञ्चेसम्मको ४८ किलोमिटर सडक खण्ड खाल्डाखुल्डी र पहिरोका कारण धराप बनेको हो । नुवाकोट जिल्ला सम्म रहेको कालोपत्रे सडक मर्मत नहुँदा र रसुवा जिल्ला अन्तर्गतका सडक पहिरोका शिकार भएका कारण यात्रुहरूले चरम सास्ती उठाईरहेका छन् ।
२०२० सालमा त्रिशुली जलविद्युत केन्द्रको निर्माण प्रयोजनको लागि खनिएको पासाङल्हामु राजमार्ग साँगुरो समेत रहेको छ । तत्कालिन अवस्थामा त्रिशुली जलविद्युत केन्द्रका सामाग्रीहरू ढुवानीको लागि निर्माण भएको यस सडकमा आजभोलि भाडाका सवारी साधनहरू सञ्चालन भईरहेका छन् । दैनिक दुई सय भन्दा बढी सवारी साधनहरू आवतजावत गर्ने यस सडकमा अत्याधिक खाल्डाखुल्डी अत्याधिक परेका छन् । घुम्ती अत्याधिक रहेको र सडक गुणस्तरहीन भएकै कारण राजमार्गअन्तर्गत काठमाडौँदेखि त्रिशुलीसम्मको जम्मा ६८ किलोमिटर दुरी पार गर्नको लागि सवारी साधनलाई चार घण्टाको हारहारीमा समयलाई लाग्ने गरेको यात्रुहरूको भनाई रहेको छ ।
यस सडकखण्डअन्तर्गत नुवाकोट र रसुवाको सिमाना वेत्रावतीसम्म बाटो कालोपत्र गरिएता पनि ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा कम स्तरको काम भएकाले एक वर्ष नपुग्दै सडक भत्किने गरेको स्थानीयबासीहरूको भनाई रहेको छ । ‘थुप्रै ठाउँमा सडक भत्किएको कारण किसानले आफ्नो खेतीबारीमा उत्पादन गरिएका तरकारी एवं नगदेबालीहरू समेत समयमा बजार पु¥याउन नसक्ने भएकाले ठूलो नोक्सानी बेहोर्न‘परेको छ’ मदानपुरका सीताराम पौडेलले भने ।
पासाङल्हामु राजमार्गबाट नुवाकोटको ऐतिहासिक नुवाकोट दरवार, भैरवी मन्दिर, जालपादेवी मन्दिर, दुप्चेश्वर, देवीघाट, बेत्रावती, वेलकोटगढी लगायतका चर्चित स्थााहरूमा पुग्न सकिन्छ । रसुवा जिल्लाको पवित्र ऐतिहासिक स्थलहरू गोसाँइकुण्ड, पावर्तिकुण्ड, पर्यटकीय स्थल लाङटाङ हिमाल, क्यान्जिङ्ग उपत्यका, रसुवागढी, तातोपानी लगायतका स्थलहरू साथै ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्वका स्थलहरू यस राजमार्गबाट पुग्न सकिन्छ ।
त्यसै गरी यस राजमार्गमा सञ्चालन हुने भाडाका सवारी साधनहरूको संख्या कमी रहेको कारण यात्रुहरूलाई सकस पर्ने गरेको छ । यस मार्गमा सञ्चालन हुने तीनबटा बस सेवा व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट प्रक्रियाबाट बस सञ्चालन गर्ने गरेका कारणले पनि यात्रुहरूले सास्ती खेप्नु परेको हो । ‘दुईवटा समितिको एकलौटी रहेको छ, हामीलाई महँगो भाडा तिर्नु पर्ने बाध्य समेत छ’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नुवाकोटका अध्यक्ष कमानसिंह लामाले भन्नुभयो । सीमित सवारीसाधन सञ्चालमा रहेको कारण यहाँका यात्रुहरू छतमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । जसले गर्दा हुने सवारी साधन दुर्घटनामा थुप्रै सर्वसाधारणहरूले ज्यान गुमाई सकेका छन् । यस राजमार्गमा हुने सवारी साधन दुर्घटनामा वार्षिक ४० भन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
प्राविधिक कर्मचारीहरु आन्दोलनमा
विदुर÷जिल्ला विकास समिति नुवाकोट अन्र्तगतको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिउका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै स्थलगत भ्रमण भत्ता नपाएकोमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
कन्टन्जेन्सी रकम पारदर्शि हुनुपर्ने कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका नौँ सुत्रिय माग राखेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
पाँच महिला सम्मानित
विदुर÷१०२ औँ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा विहिवार नुवाकोटका विशिष्ठ पाँच जना महिलाको सम्मान गरिएको छ ।
सम्मानित हुनेहरूमा नुवाकोटका पहिलो पाइलट गेर्खु गाविसका रिता प्याकुरेल, करातेका साफ खेलाडी थप्रेकका अनु अधिकारी, मानव वेचविखन विरुद्धको अभियन्ता रालुकादेवीमा अस्मिता थापा, भद्रुटारका विन्दा सुनार र ९३ वर्षिया वुद्धा राममाया गुरुङ छन् । उनीहरूलाई सभासद् जगदीश्वरनरसिंह केसीले सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रमको आयोजना महिला तथा वालवालिका कार्यालय नुवाकोट, अन्तरपार्टि महिला सञ्जाल, नारी चेतना समाज, शक्ति समुह, सोलिड नेपाललगायतका ११ वटा सङ्घसंस्था र कार्यालयहरूले सयुक्त रुपमा आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सभासद् केसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारी, प्रहरी नायव उपरिक्षक दिपक खरेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
पहिरोको अध्यायन सुरु
विदुर÷नुवाकोटको किम्ताङ गाविसका १९ वर्षदेखि बगिरहेको पहिरो प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमाा पुर्नवास गराउन सरकारी तवरबाट अध्यायन थालिको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तोष पौडेलको नेतृत्वमा छ सदस्यीय टोली पहिरो निरिक्षणका लागि किम्ताङ पुगेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिरोपीडितहरूको मागको सम्वन्धमा गत माघको तेस्रो साता सर्वदलीय बैठकले पहिरोको स्थलगत अध्ययन र प्रतिवेदनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सरोकारवाला कार्यालय सदस्य रहेको किम्ताङ पहिरो अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारी गृह मन्त्रालयलाई बुझाउने जनाएको छ ।
पौडेलको नेतृत्वमा मालपोत अधिकृत पृथबहादुर केसी, सहायक वन अधिकृत सरोजकुमार पाण्डे, प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर ललितबहादुर न्यौपाने तथा भूसंरक्षण कार्यालय र नापी कार्यालयबाट कर्मचारीहरू पुगेर पहिरोको स्थलगत अध्ययन सुरु गरेका छन् ।
फर्निचर व्यवसायी आन्दोलनमा
विदुर÷नुवाकोट जिल्लाका फर्निचर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रहरी र बन कार्यालयले आफ्नो काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
नुवाकोट फर्निचर व्यवसायी सङ्घ र वन पैदावर सङ्घले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । फर्निचर व्यवसायी सङ्का सचिव मुक्तबहादुर बोगटीका अनुसार प्रहरीले फर्निचरको अनुगमन गरेर सालका काठहरूमा सिलबन्दी गरेको छ । भ्याटविल हुँदा पनि आफुहरूलाई प्रहरी र प्रशासनले दुःख दिएको बोगटीको भनाई रहेको छ ।
व्यवसायीहरले काम गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनीहरूले आइतवार जिल्ला प्शासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
आफुहरूले चेत्र १० गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको र त्उस मितिसम्म माग प्रति कुनै सुनुवाई नभएमा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको भनाई रहेको छ ।
सचिव बोगटीका अनुसार फर्निचर व्यवसायीहर चैत्र १० गतेबाट आफ्नो कलकारखाना बन्द गरेर आम हड्तालमा उत्रने कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रशासनबाट काम गर्नको लागी खुकुलो वातावरणको सृजना नभएसम्म जिल्लाका फर्निचर उद्योगहरू बन्द गरिने उनको भनाई रहेको छ ।
नुवाकोट जिल्लामा तीन सय भन्दा बढी फर्निचर उद्योगहरू छन् । त्यस मध्ये एक सय पचास उद्योगहरू सङ्घमा आवद्ध छन् ।
सचेतनद्धारा दुईको सम्मान
विदुर÷१०२ औँ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा समाज सचेतन केन्द्र नुवाकोटले महिलाहरुको अधिकारका वारेमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सम्पन्न गरेको छ ।
विहिवार सचेतन हलमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा महिला अधिकारको क्षेत्रमा नुवाकोटमा भएगरेका कार्यहरूको समिक्षा गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा संस्थाले दुई जनाको सम्मान गरेको छ । सम्मानित हुनेहरुमा नुवाकोट होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष उप्रेती र शिक्षक मनोज मिश्र रहेका छन् ।
उनीहरूलाई संस्थामा पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै सम्मान गरिएको संस्थाका अध्यक्ष यमकुमार खातीले जनाएका छन् ।
दुर्घटनामा १२ घाइते
विदुर÷गोस्र्याङ गाविस–९ मा शनिवार साँझ भएको मिनिट्रक दुर्घटनामा परी १२ जना घाइते भएका छन् । एक जनाको अवस्था गम्भिर छ ।
त्रिशुलीबाट दाङसिङ जाँदै गरेको बा २ ख ९८१० नम्वरको मिनिट्रक भमरामा सडकमै पल्टिएको थियो । घाईते मध्ये दाङसिङ–५ का १७ वर्षिया सन्तमाया तामाङ गम्भिर रहेको र उनलाई उपचारको लागी काठमाडौँ लगिएको छ । गोस्र्याङ–८ का १८ वर्षिया शिव तामाङ र चक्रदेवी प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक सुकम्वरप्रसाद यादव, दाङसिङ–७ का बाटी नेपाली, सोही गाउँका गितावल्लभ घिमिरे, गोस्र्याङ–८ का शर्मिला तामाङ, राजन तामाङ, वडा नं. ६ का देवी तामाङ, वडा नं. २ का जयबहादुर तामाङ, सर्लाही बलराका राजिव मिश्र घाइते भएका छन् ।
उनीहरूको बट्टार स्थित पञ्चकन्या अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
लेखापढी ब्यवसायीलाई पनि प्यान
विदुर÷सरकारले सबै लेखापढी व्यवसायिको लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्ने निर्णय सहित सम्बन्धित कार्यालयहरूमा सर्कुलर जारी गरेको छ ।
उक्त निर्णय फागुन भित्र कार्यान्वयन गराइसक्न भन्दै सर्कुलर गरेको नुवाकोट मालपोत कार्यालयका प्रमुख पृथबहादुर केशीले बताउनुभएको छ । महिनामा १२ हजार रुपैयाँ कमाउनेले आय कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसलाई लेखापढी कानून ब्यवसायि एसोसियसनले सकारात्म रुपमा लिएको छ । एसोसियसनका नुवाकोट अध्यक्ष
धनेन्द्रजङ्ग पाण्डेका अनुसार प्यानमा दर्ता गर्ने क्रम शुरु भइसकेको छ । एसोसियसनमा हाल ६६ सदस्य छन् ।
▼ March 11 - March 18 (20)